Ny Andavanandron’i Afrika: Ny Fiainana Andavanandro An-tsary, Manerana An’i Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jona 2018 8:23 GMT
(Fanamarihana: nivoka tamin'ny febroary 2014 ity lahatsoratra ity)
“Angon-tsary iray momba ny fiainana andavanandro manerana ilay tanibe, manisy tsindrimpeo amin'ireo zavatra mahazatra sy ny mahavantana. Amin'ny maha-mpanao gazety izay niaina na nandany fotoana betsaka teo amin'ilay tanibe, hitanay fa tsy dia miparitaka loatra noho ny andavanandro ny tena henjana. -Everyday Africa (Ny Andavanandron'i Afrika), santionana pejy fanehoana ny tetikasa“
Tetikasa iray natsangan'ireo mpaka sary hatao tahirinkevitra Peter DiCampo sy Austin Merrill ny “Ny Andavanandron'i Afrika”, tamin'ny taona 2012. Reraky ny mahita ireo sary misy an'i Afrika aseho mandrakariva amin'ny resaka hanohanana, ady sy fijaliana, natombok'izy ireo ny tetikasa iray vaovao mba hanehoana ny mahazatra, ny andavanandro – ary ny fahasamihafàn’- ny fiainana eo amin'ny tanibe afrikana.
Noresahako tamin'i Peter teo amin'ny Skype ireo tanjon'ny tetikasa.
Laura Morris: Ny pejy mampiseho ny Everyday Africa (Ny Andavanandron'i Afrika) milaza an'izao: ‘ Ahoana no hahafahantsika mamantatra an'ireo tena henjana raha tsy atsangana aloha ny fampiasa mahazatra sy ekena”. Azonao hazavaina amiko ve io teny io?
Peter DiCampo: […]. Ity dia fanambaràna iray izay manaiky ny fomba fijery tokana izay omen'i Afrika ho antsika.
Ny voalohany indrindra dia…
Ny dingana voalohany dia ny mahita ny fisampanana ho roa. Hotely raitra iray izay mandondona an'ireo trano bongo. Afaka hiala ny tobin'ireo mpitsoa-ponenana ianao ary mivantana aminà ivontoerana ara-barotra anatinà ora vitsivitsy. Inona no fanao mahazatra sy ekena, inona no mahatsikaiky? Miankina amin'ny olona miresaka aminao io. Ny dingana faharoa dia ny manao izay hahazoana fa tsy resaka fisampanana ho roa velively io. Mety miankina koa amin'ny olona hifampiresahanao io. Mety ho fiainana fotsiny tsotra izao!
Peter DiCampo: […] Tsy hahafahana mijery ny vahoaka ho toy ny olona ireo sary mikasika an'i Afrika. Toy ny maneho azy ireny ho olona mpilalao tantara mampientanentana. Ka noho izay, moa ve ny sasantsasany miaramila ary ireo hafa indray iharan'ny mosary, ireo hafa koa tradoza iharan'ny fifandonana, saingy tsy misy fotoana mihitsy ahitana faritra maloka, ny fanekena fa olombelona ireo amin'ny fomba fijery rehetra, sahala amin'ireo hafa amintsika rehetra, izay manana fanantenana, mila misakafo maraina, ireo ankizy, sy ny sisa… Tsy asehony antsika hoe ireo olona izay hitantsika mahazatra any anatin'ireo trangana fifandonana ireny, anatin'ireo fisehoan-javatra tena henjana, dia betsaka lavitra noho izay asain'ireo sary ho inoana.
Feno fitanisàna mikasika an'ireo olona ‘ara-dalàna’ izay tsy nalaina sary velively fotsiny, na tsy naseho mihitsy tamintsika, satria ho antsika, ireo fisehoan-javatra tena henjana no zava-dehibe.
Vehivavy iray mijery ny fotoam-pivavahana ao amin'ny fiangonana iray, ao Sirigu, faritra Atsinanana, Ghana, 30 jona 2013. Sary Peter diCampo.
LM: Lazao amiko fohifohy hoe ny mikasika ny rafitry ny fikambanana. Ahoana no fandehany?
Tontosa tamin'ny ampahany betsaka tamin'ny taona lasa ny Andavanandron'i Afrika, rehefa niasa izahay [Austin Merrill sy Peter DiCampo] noho ny fanampian'ny Ivontoerana Pulitzer, ao Côte-d'Ivoire tamin'ny fanatontosana fanadihadiana iray tena mifanaraka amin'ny mahazatra momba ny toedraharaha aorian'ny fifandonana, ary tamin'ny iPhones-nay no natombokay ny fandraketana an–tsarimihetsika. Nanananay ny resadresaka mikasika ny hoe ilay Afrika izay fantatsika dia zara raha ilay Afrika izay naseho, i Afrika izay izahay mpanao gazety roa, no nampiseho azy. Avy teo, araka izany, no nitsiry ny hevitra.
Haingana be no nahafantaranay tamin'ny alalan'ny firesahana tamin'ireo namanareo sy ireo mpiara-miasa fa nifampizaràn'ireo ireo mpaka sary izay monina ao amin'ny tanibe, na manana fifandraisana mivaingana amin'ilay tanibe ireny fahadisoam-panantenana ireny. Noho izany, nangataka ny mba handray anjara izy ireo na niangavy azy ireo izahay raha toa ka tian'izy ireo ny hanomboka hamoaka sary ho anay, tahaka ireo mpaka sary matianina nampalaza ny Instagram tany amin'ny fiandohany, mba tsy ho maro no handingana io fotoana io.
Famerenan-desona ao Kakuka, ao Ogandà, teo amin'ny sisintany iraisany amin'ny RDC, ny 7 jona 2012. Sary an'i Peter di Campo.
LM: Mpaka sary fanao anaty fanadihadiana daholo ve ireo olona ireo?
PDC: Eny, izany tokoa. Manana fandraisana anjara matanjaka nataon'ireo mpaka sary afrikana izahay mikasika an'o. Izahay dia manana [mpandray anjara] vitsivitsy ara-dalàna sy mpanao antselika hafa. Mpaka sary fanao amin'ny fanadihadiana avokoa ry zareo ireo.
Hatramin'ny namoahako ny adiresy imailaky ny Andavanandron'i Afrika teo amin'ny kaontiko Instagram, dia imbetsaka isankerinandro izahay no naharay hafatra marobe avy amin'ireo olona te-handray anjara amin'io. Indraindray, mpaka sary matianina monina ao amin'ny tanibe izy, izay te-handray anjara amin'io amin'ny maha-mpiaramiasa azy, saingy indraindray kosa, ry zalahy te-handefa ho ahy ireo sary roa nalainy tamin'ny iPhone-ny fotsiny. Andramanay ankehitriny ny mandamina an'ireo rehetra ireo. Ny hevitra dia ny hitazonana ny karazana fijery mikasika ny atao hoe “Ny Andavanandron'i Afrika”, ary manaiky fa karazana firenena samihafa [sy] mpakasary isankarazany no resahantsika, matianina na tsia.
Mody masoandro eo amin'ny reniranon'i Zambèze, eo ambonin'ny riandranon'i Victoria, amin'ny sisintanin'i Zimbabwe sy Zambie. May 2012. Sary avy amin'i Austin Merrill.
Miely patrana ny tetikasa Ny Andavanandron'i Afrika. Mamorona programa fanabeazana izahay mba hisarihana ireo zatovo hanaraka azy ireo ao amin'ny Foiben'ny Tahirinkevitra ao Bronx any New York. Ny lesona dia handrisika ireo mpianatra mba hampitaha an'ireo sary mikasika ny vaovao ao Afrika amin'ireo sary an'ny tetikasa Ny Andavanandron'i Afrika, amin'ny alalan'ny fianarana ny asa fanaovana gazety, ny fomba fampivoarana fijery isankarazany, ary izay ahitana ireo fitsaratsaram-poana. Manaraka izay, mankany amin'ireo vondrom-piarahamonina misy azy avy ireo mpianatra mba haka sary azy ireo. Rehefa vita ny tetikasa, ho azo trohana maimaimpoana ilay fandaharanasa.
Ireo lakana fanjonoana ao amin'ny seranan'i San Pedro, Côte-d'Ivoire. Martsa 2012. Sary an'i Austin Marrill.
Azonareo arahana eo amin'ny tumblr, instagram, sy twitter @EverydayAfrica ny tetikasa Ny Andavanandron'i Afrika.